မျက်နှာထား ဆိုင်ရာ အီဒီယံ အသုံးအနှုန်းများ
"When I saw him climb out all wet and muddy, it was so funny. It was hard to keepastraight face, but I knew if I laughed, I'b be in trouble at the office next day."
"Sue တယောက်က ပိုကာ ကစားတဲ့အခါ အများအားဖြင့် နိုင်လေ့ရှိပါတယ်။ သူ့ လက်ထဲမှာ တစ်ဖဲ လေးချပ်လောက် ရှိနေရင်ဖြစ်စေ၊ သူလက်ထဲမှာ ဘယ် ဖဲ ကောင်းကောင်း မရှိတဲ့အခါဖြစ်စေ သူက မျက်နှာသေနဲ့ သိပ်ကို နေနိုင်တယ်။ သူ့ ဖဲတွေဟာ အများအားဖြင့် မမျှော်လင့်တဲ့ ဖဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ခင်ဗျား သူ့ကို ဖဲရှုံးပြီး ငွေပေးဖို့သာ ပြင်ပေးတော့။"
Straight man - Straight (ဖြောင့်သော၊ မတ်သော) Man (လူ) - ဖြောင့်မတ်သောလူ၊ တည်တည်တန့်တန့် ရှိသောလူ လို့ လုံးကောက် ပြန်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အီဒီယံ အသုံးမှာတော့ သူတပါး ပေါ်လွင် ထင်ရှားဖို့အတွက် အဖြည့်ခံ လူလို့ အဓိပ္ပါယ် ဆောင်ပါတယ်။ ပြဇာတ်ကပွဲတွေက ဆင်းသက်လာတဲ့ စကားဖြစ်ပါတယ်။ ထုံအအ နဲ့ ဖြေဖျော်တင်ဆက် သရုပ်ဆောင်ရတဲ့လူကို ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ပြဇာတ်ရုံတွေက ဆင်းသက်လာတဲ့ စကားဖြစ်ပါတယ်။
"My job asastraight man is to set up his jokes and act dumb, so, he can make people laugh at me. He pays me well though. He knows I won of the best straight man in the business and he wouldn't be half as funny without me."